"Plus Bank": wongororo yemutoo wezvikwereti motokari. Rating mabhanga
The rwezvemabhengi mabasa pamusika chiito sezvo chevanorwara nokudenga, ichipa vatengi waro yakazara-siyana siyana mhinduro, uye zvikuru kushandiswa mabhanga, izvo anoshanda mune imwe niche. Izvi hazvirevi kuti havasi kupa mamwe mabasa - chete mune dzimwe nzvimbo zvivako izvi pane ichiwedzerwa basa nokuda rakafara mutengi chawo, kuitika, mazano ruzivo.
Just imwe nemasangano aya chichakurukurwa munyaya ino.
Tiri kutaura "Plus Bank" (Moscow). makasimba ichi, icho mubasa urongwa siyana rwezvemabhengi mabasa, kufunga panguva iyoyo iri motokari chikwereti. Izvi zvakajeka kwechokwadi Statistical Data kwakunoitwa ratings uye mazano ose kubhengi. All ichi, uyewo pamusoro unhu basa, tariffs, uye nzira zvaipiwa nemhosva yako "Plus Bank"; kero uye nhamba huru mahofisi runhare - uchaona zviri munyaya ino.
Munguva gadziriro kwemashoko tinoshandisa mutengi inofambiswa, uyewo Vhuṱanzi pamusoro chii chinoumba maumbirwo ichi.
Tinotanga dzinozivikanwa chete nhoroondo ruzivo pamusoro pezviri mubhangi chii zvayo mavambo. Izvi zvinokosha kana kuti pasina zvimwe chikonzero kuti chidimbu ichi bhizimisi inoita basa rinokosha munhau retrospective, zvekare rokubhengi wayo mukurumbira, iro dzinovakwa remangwana ukama zvose. Pashure pezvose, kuvimba kwako mari sangano ane dubious nhoroondo haangavi mumwe. Naizvozvo, tinoona sei kuumbwa "Plus Bank". Kuvimbika tichaita kuongorora zvishoma mberi, achibatsirwa mashoko pamusoro yesangano uye wongororo nezvazvo.
Bank The nyaya inotangira shure muna 1990, apo maererano Soviet Zhilsotsbank (kana nani chete nechepakati muhofisi yacho) uye Commercial Bank kwakatangwa pasi zita "Omsk". Zita tsika yacho achinja kaviri. Sezvo tsika inoratidza izvi zvinoitika chakajairika iri rwezvemabhengi pamusika. Muna 2004, akanzi "Omsk-Bank". Inoitwa zvakafanana zvachinja nemamiriro sangano varidzi (azvaiitwa zvino). Nechekare muna 2010 hurumende yakasarudza kuzviramba zita reguta nezita rokubhengi uye akaritumidza "Plus".
No mibayiro nokuti guessing kuti yokutanga kuti "Plus Bank" Saint-Petersburg uye guta guru havana "chizvarwa" guta: Bazi yokutanga yakavambwa muna Omsk. Mushure mamiriro kwazova kunokosha, uye kuwedzerwa munharaunda yakakura, kwakasarudzwa kuti musimboti muhofisi guru (saka ikozvino pakero iri "Plus Bank": Moscow, Lime Lane, 7). Office, yaiva pano, runoonekwa chikuru kubvira 2014.
Nhasi, tsika ndiyo nhengo ratings siyana, sezvo vanodada akataura website yayo mapeji. Pane kunyange chikamu chinokosha apo zvose chinzvimbo mazita uye mibayiro, rave paakavapa ari "Plus Bank". Rating, sezvamunoziva, zvinogona kunge zvakasiyana: kutanga yakakurumbira paIndaneti basa kunyatsoongorora "Banking". Izvi inoti kubhangi akagamuchira chete pamusoro kota rekuva mavhoti, ndokusaka ari "vanhu" chepamusoro anogona kuwanikwa chete wokutanga League.
Kana isu nezvazvo zviratidzo zvakadai zvachose zvinhu, maererano chokuratidza ichi, kugadzwa pachigaro 158 fung nzvimbo mhiri Russia (uye 104th muna Omsk) pamwe mufananidzo bhiriyoni 26. Kana mambure mari, inounganidzwa muna 2015, "Plus Bank" (mapazi ayo riri 7 kumatunhu Russia) aigona mari vanenge mamiriyoni 111 rubles. Maererano nedzimwe parameters sangano kwakaitika nani. ari kuera.
Somuenzaniso, tora kanenge kwakaitwa vanhu vari "Plus Bank" deposits. Maererano pamutemo mashoko, ivo wakabura anenge mabhiriyoni 19 rubles. Iyi nzvimbo 92-fung muRussia uye 62th muna Omsk, iyo runogonesa mukurumbira pamahombekombe mumusika. The chikwereti Portfolio zvakare wandei - pamusoro nzvimbo 116-fung muRussia pane dimikira bhiriyoni 20.
Saka, tinogona kugumisa kuti pakagadzwa riri pedyo wokutanga "zana" mabhanga Russian, inova rakaisvonaka kufarira remunharaunda centre, izvo zvose vakatanga.
The rwezvemabhengi sangano wacho Portfolio, maererano nerondedzero kubva pamutemo peji hwakapararira chisarudzo "Car chikwereti". Pasina muripo uye kwokutanga mubayiro, vaifanira kukwanisa anosvika mamiriyoni 4,5 rubles, kusvikira makore 7 (ndiko - zvakajairika zviratidzo, ivo zvinosiyana zvichienderana mwero panguva iyo mutengi kushumirwa). Uyewo, "Plus Bank" (St. Petersburg) iri mubasa urongwa uye mamwe mabasa. Zvikurukuru, ichi zvinosanganisira Classic kuti mabhanga anokweretesa kuti pokugara uye nevatengi zvikwereti, deposits uye mabhizimisi mabasa. Verenga zvimwe pamusoro pavo tichataura mberi.
It rinoti kuti kubhangi basa anobva nekupatsanurwa kubva pamutemo wenyika nemhosva. Saka, pane mabasa vanhu uye pamutemo masangano.
Ngatitange pamwe hombe (kunyange zvishoma runobatsira kubhangi) nemauto mikana iripo zvavo vanhu. Izvi inosanganisira anomukweretesa uye dhipoziti kupinza. Kakawanda, Chokwadi, tinosangana tsanangura "Plus Bank" wongororo pamusoro motokari chikwereti. Izvi imhaka chokuti, sezvataona, ichi ndicho chimwe chezvinhu zvemberi mabasa mubhangi wacho Portfolio.
Kuwedzera izvi, nzvimbo ine mashoko pamusoro mamwe mabasa, akadai okuchengetera bhokisi pamwe mubhengi kuchengeteka dhipoziti mabhokisi uye kugamuchirwa vachibhadhara, mari kwema uye remittances. Izvi zvinogona kunzi kune issuance kuti bhangi makadhi, akaronga kuti vachibhadhara muzvitoro, bonuses uye zvakafanana.
Zvino kutsanangura Mapato muudzame kumusoro.
The zvazvingava inokosha kuti tsika kuti zvikwereti kutenga motokari. Izvi zvinoratidzei anoratidzwa papeji "Plus Bank" akaongororazve pamusoro motokari chikwereti. Hazvishamisi pano anorondedzera parameters kuti vakasangana pedyo nemhosva. Kana pfupi, yose chikwereti mapurogiramu vari vaviri - a "AvtoPolyus Hull" uye "Dealer +". Vakasiyana pakati pachavo chokuti kusarudza chechipiri inhoroondo ya kutenga motokari panguva inotengeswa. Kusiyana kuvapowo tichitaura zvikwereti. Kunyanya, chokutanga chirongwa nguva - kubva 1 kusvika 7 makore asi rechipiri - kusvika 5. Uyezve, uye dzinosiyana nyika zvinobvumidzwa mari (kusvika mamiriyoni 3,5 mumutsetse wokutanga uye 4,5 - wechipiri). Pamusoro Website pamusoro webhanga yakati kuti kwokutanga muripo kana waita chikwereti haisi kuzvireva. Mukuwedzera, Hull magadzirirwo kubvumirwa pamusoro chikumbiro, uye sarudzo iri chokwadi kuti chikwereti achaparadzwa rakapa, vachaitwa mukati neawa pashure chikumbiro kuna dhipatimendi "Plus Bank". Reviews ose repair zvikwereti kubva nemakasitoma, ticharamba kupa pfungwa dzako zvishoma gare gare.
The mhando chechipiri zvikwereti, iro basa "Bank Plus" - chikwereti kutenga dzimba. Pano, maererano mashoko yacho, akapa mari yakareba shure (makore 30), uye zvinofungirwa yakawanda (300 zviuru rubles). Change ukoshi yakananga mari mhando, unogona kushandisa karukureta, rinomiririrwa panzvimbo - pano vanofanira kunzi vakawanda mashoko pamusoro mari, izwi, kufarira, ukuru uye zvichingodaro. Kubva musi uyu, ari maitiro anopa zvikuru Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri mwero mumwe chaicho mamiriro ezvinhu.
Shandisa ikozvino woona kana uchigona kuwana chikwereti, zvinokwanisika nomukombiyuta paIndaneti chimiro pamusoro Website pakati kubhengi.
Sezvo vamwe kuita, "Plus Bank" anogamuchira deposits kuti mubereko kubhadhara uye kuunganidza mumuviri uye zviri pamutemo masangano. The kunonyanyisa bheji kana pakubata private nemakasitoma yakasvika 11.5%. In zvachose, kuti mutero purogiramu anopiwa 6 nezvezvirongwa kuti zvigoneke kuti mari akasiyana dzeEurope (the Ruble kana dhora / Euro).
For makambani deposits mubhangi ichi zvinosanganisira mukana wokugamuchira kusvika 14% chete annum zvichienderana rakachengetedzwa uwandu. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro izvi zvinogoneka chete kuburikidza Nhaurirano consultants, sezvo mashoko ose nomumwe.
Kana mukuru zvigadzirwa kuti "privateers" - zviri zvikwereti uye deposits, navadzidzisi masangano anoshandiswa vamwe nzira. Somuenzaniso, ndicho Implementation Mari Kutarisira mabasa ebhizimisi, kutengeserana mari, muunganidzwa mari. izvi zvose rinowanzoshandiswa muzvirongwa zvebhizimisi, saka yemakambani vatengi kuti "Bank Plus" - iri diki kunyanya uye unosvikirwa mabhizimisi. Pano, mu "Company" chikamu, unogona kuona mashoko pamwe nemamwe rwezvemabhengi masangano.
Sezvambotaurwa, kune "Plus Bank" mahofisi anoshanda 7 Regional nzvimbo (Moscow, Omsk, St. Petersburg, Ekaterinburg, Tyumen uye Ryazan). General mashoko runhare nhamba, iyo inowanika munzvimbo dzose: 8 (800) 200-23-72. Pano unogona kudana chero nguva yezuva, zvinoda vakasununguka. Nerumwe, unogona kutaura kubhengi bazi. MuMoscow, chikuru bazi iri calcareous Lane 7, 8 (495) 989-42-99. Hours vanhu - kubva 9 21 zuva nezuva, nokuti mabhizimisi - kubva Muvhuro kusvika Chishanu kubva 9 kusvika 18.
Kujekesa mashoko pamusoro hofisi zvekwaunogara zvinogona pamusoro pamutemo websites mu "dhipatimendi" chikamu.
"Plus Bank": wongororo yemutoo wezvikwereti motokari
Kuti vazive kuti vatengi, kurayira basa iri, iva nechokwadi kuti bvunza kubhangi kuti vatengi mashoko. Takaunganidza mashoko kupa munyaya ino. Naizvozvo, nokuti nyore, uchaverenga chikamu peizvi.
Ngatitange nepfungwa yokuti zvirokwazvo pane zvakasiyana mashoko zvose zvakanaka uye kunaka. Zvose zvinoenderana sei mushanyi yakagamuchirwa kana kuti amupe zvizere ruzivo rutsigiro avo ezvinhu, kana aitova chete ezvinhu zvakagoverwa pakutanga.
Kana zvikwereti motokari, vatengi vakawanda zvinogutswa zvechokwadi chete. Vakapiwa chikwereti kutenga motokari kuti zvakazara kugutsa zvavanoda uye, naizvozvo, kwakaita kuti zvakanyorwa zvakanaka nezvokubatsira tsika. Zvisinei, hadzigoni zvose kuva laudatory wongororo.
Kune akawanda kunaka zvechadenga basa kuburikidza vatengi vanoda kuronga motokari chikwereti. Zvikurukuru, vanhu vakataura kuti zita zvakaipa chimbadzo (izvo chaizvoizvo akava akakwirira kupfuura nemashoko maneja); kana kuti chikwereti mari iri kwaita yakawedzera vanotanga kuti mushandi kubhengi. Chokwadi, zvinhu sezvishamiso chaizvo uye ari kutyora pachena yemakambani nokuzvibata uye kazhinji kunoratidza yokushandisa simba Bank vashandi. Zvisinei, kana izvi zvinhu zvaiva zvechokwadi, avo basa angangodaro akatambura chirango. Pashure pezvose, kubhengi ane zvose zvinyorwa, kusanganisira mavhidhiyo uye audiofiksatsiya kukurukurirana makasitoma vashandi. Ratidza kutyorwa kwakadaro hakusi nyore.
Saka, zviri pachena kuti, mhosva idzi nyore havana yasimbiswa kana vakanga vanatswa makuhwa. Kazhinji, vakawanda mutengi mhinduro uye zvichemo, hofisi huru pakarepo kupa zvavakataura uye nemhinduro.
Reviews pamusoro Bank
Maererano nomukurumbira tsika "Plus Bank" zvavo, zviri siyana, zvichienderana chigadzirwa kuitwa akasimudzira mumusika. Somuenzaniso, imwe motokari chikwereti pane mukurumbira chigadzirwa yacho Kukwezva mumaziso mutengi. Comments pamusoro chikwereti ezvinhu zvakare wakanaka. Chimwe pfungwa - Somuenzaniso, deposits. Pano zvinhu hazvisi kunaka kudaro, sezvo "Bank Plus" kazhinji akabata pfupi-rokuti unganidza. Kukwezva vanhu nomumwe muzana, iri kukurumidza kuchinja inoenzanirana hunokonzera pfundepfunde vatengi. Kushanda pamwe mumatare masangano, mukurumbira kubhangi kuti riri kukwira.
Saka, pakupedzisira, ndinoda kuona kuti sangano iri kushanda nenyanzvi kuti vakabudirira kukurudzira pamusoro musika kwemakore anopfuura 25. Ndiyo "zvakataurwa" zvakanaka pamusoro basa rose mamiriro. Naizvozvo, tsvaka mazwi pamwe panyaya kuti, izvo uri kufarira uye kunzwa vakasununguka kuenda "Plus Bank".
Russian Agricultural Bank: tsananguro, nhoroondo, kuita uye wongororo
Recapitalization - nayo ... Unoita recapitalization kuti mabhanga
Uye munoziva kuti kushandisa ATM zvakarurama?
Bank "Russian Standard": wongororo uye zvinhu
Mari dhipoziti "Blitz-mari" (Alfa Bank)
Nzira yekuratidza sei chifuva - zviduku zviduku uye maitiro
Linnik Svetlana VLADIMIROVNA, mudzimai Dmitriya Medvedeva: Biography, mhuri, nevamwe
Kujeri - nayo ... Detention
Maberere nokuti maruva munyika nemaoko avo pachavo
Chii chakakosha chemavhareji aporo?
Nutmeg - uye nezvinonhuhwira uye mushonga
Details sei kuona zvakavanzika Albums "In Contact"
Room tembiricha kuvatarisira
Muti upi Anotumbuka pashure pane zvose nechepakati Russia?
Simba mitsetse (STRUCTURAL hurongwa) zvinoreva Definition
Kumusha mbatatisi fries - Belgium
Kuitira mhuka utsinye: Article 245 yemutemo weCriminal Code. Chirango kwemhosva